Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » COVID-19 wuxuu beddelaa Caadooyinka Safarka Talyaaniga
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Italy War Deg Deg Ah • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tirada dadka ku safraya saadaasha gaadiidka dadweynaha ayaa hoos ugu dhici doonta boqolkiiba 22.6 kadib fasaxa xagaaga.
In ka badan 50% kuwa qorshaynaya inay beddelaan dhaqankooda safarka ayaa sababta ugu weyn u sheegay cudurka faafa ee COVID-19
Isticmaalka weyn ee shaqada fog iyo waxbarashada fog waxay soo jeedinaysaa isbeddel ku yimaada caadooyinka socdaalka.
Xog cusub ayaa imaanaysa in kasta oo uu socdo ololaha tallaalka gudaha ee Talyaaniga.
64.66 boqolkiiba dadka bartilmaameedka u ah (ama 34.9 milyan oo qof) ee Talyaaniga ayaa si buuxda loo tallaaley laga bilaabo Arbacadii.
Talyaanigu Machadka Qaranka ee Tirakoobka (ISTAT) ayaa maanta soo saaray warbixin, taasoo muujinaysa in COVID-19 masiibada waxay sii wadi doontaa inay saamayn ku yeelato qaababka dhaqdhaqaaqa shaqaalaha Talyaaniga iyo ardayda bilaha soo socda.
"Isticmaalka weyn ee shaqada fog iyo barashada ayaa tilmaamaysa isbeddel ku yimaada caadooyinka socdaalka ee shaqaalaha iyo ardayda," ISTAT ku qortay warbixinteeda.
In kasta oo in ka badan 80 boqolkiiba ay u safraan ugu yaraan shan jeer usbuucii kahor masiibada, in ka yar 70 boqolkiiba ayaa qorsheynaya inay sidaas ku sameeyaan isla inta jeer ee soo socota. ”
Ka mid ah shaqaalaha iyo ardayda ku lugta leh daraasadda, in ka badan 50 boqolkiiba kuwa qorsheynaya inay beddelaan dhaqankooda dhaqdhaqaaqa ayaa sababta ugu weyn u sheegay xaaladda degdegga ah ee coronavirus.
ISTAT ayaa sidoo kale saadaalisay isbeddel ku yimaada caadooyinka gaadiidka, iyadoo tirada dadka ku socda saadaasha gaadiidka dadweynaha ay hoos ugu dhici doonto 22.6 boqolkiiba fasaxa xagaaga, marka la barbar dhigo 27.3 boqolkiiba ka hor masiibada.
Xogtan ayaa timid in kasta oo uu socdo ololaha tallaalka gudaha ee Talyaaniga, kaas oo arkay 64.66 boqolkiiba tirada dadka la beegsanayo Talyaaniga (ama 34.9 milyan oo qof) si buuxda tallaalay ilaa Arbacada.
Faafida ayaa sidoo kale yareyn doonta inta jeer ee safarka shaqada iyo waxbarashada, sida ay sheegtay wakaaladda tirakoobka.
Daraasadda waxaa lagu sameeyay qayb ka mid ah sahanka kalsoonida macaamilka ee ISTAT ee bishii Luulyo oo laga qaaday muunad ilaa 2,000 oo muwaadiniin ah oo jira 18 ama ka weyn.